Romance – Channel Myanmar
IMDB: 6.9/10 850 votes
The Will (2020) The Will (2020)============IMDb Rating - 6.0/10#Unicode2020 February မှာထွက်ရှိလာတဲ့ The Will ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အချစ်ဇာတ်လမ်မျိုးးမဟုတ်တဲ့ Romance, Drama ကားလေးဖြစ်ပါတယ်..........Josephine Malone ဟာ သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ သူ့အဘွားကိုဆုံးရှူံးပြီးနောက်မှာ‌တော့ အမွေများစွာကို ဆက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတာက သူ့အဘွားရဲ့သေတမ်းစာထဲမှာသူစိမ်းယောက်ျားတစ်ဦးကိုလည်း အမွေတွေလွှဲခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Josephine နဲ့ Jake တို့ဟာအမွေကိစ္စအကြောင်းပြုပြီး စတင်တွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Jake က အိမ်ထောင်၃ခါပြုဖူးပြီးကလေး၃ယောက်ရှိပါတယ်။ အရမ်းလှပပြီး အထက်တန်းကျလွန်းတဲ့ Josephine က Jake နဲ့အဆင်ပြေပါ့မလား။ သူ့အဖွားကရော ဆွေမျိုးသားချင်းမဟုတ်တဲ့ Jake ကို ဘာလို့အမွေတွေပေးခဲ့တာလဲ။Josephine ရဲ့အဖွားနဲ့ Jake မှာ Josephine မသိတဲ့ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေများ ရှိနေမလဲဆိုတာကိုRomance အခန်းတွေအများကြီးနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Thingyan ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyi2020 February မွာထြက္ရွိလာတဲ့ ...
IMDB: 6.0/10 297 votes
Whispering Corridors2: Memento Mori (1999) [Unicode]ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကျောင်းသူ မင်အာဟာ ကျောင်းရဲ့ လက်ဆေးရေပန်းနားမှာ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်... သူမ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာရီက စုံတွဲဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးပါ ။ အဲ့အပြင် ဒိုင်ယာရီထဲက စုံတွဲလေးက သူမတို့ကျောင်းက ဟျိုရှင်းနဲ့ ရှီအွန်းဆိုတဲ့ lesbian စုံတွဲလေးပါ ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာတော့ လူတွေမသိသေးတဲ့ ဟျိုရှင်းနဲ့ ရှီအွန်းရဲ့ အကြောင်းတွေရယ်... သူတု့ိ ၂ ယောက် လမ်းခွဲရတဲ့ အကြောင်းတွေရယ်ကို ရေးသားထားတာပါ ။တစ်နေ့တော့ ဟျိုရှင်းဟာ ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်... သူမဘာကြောင့် သတ်သေခဲ့တာလဲ? ရှီအွန်းအပေါ်စွဲလမ်းနေတဲ့ ဟျိုရှင်းက ဘယ်လိုတွေ ဒုက္ခပေးမလဲ? လူတွေမသိတဲ့ သူတို့ကြားက လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီကားလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါနော်...။( အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Seung ဖြစ်ပါတယ် )[Zawgyi]ဇာတ္လမ္းအက်ၪ္း ေက်ာင္းသူ မင္အာဟာ ေက်ာင္းရဲ႕ လက္ေဆးေရပန္းနားမွာ ဒိုင္ယာရီစာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ရွာေတြ႕ခဲ့ပါတယ္... သူမ ရွာေတြ႕ခဲ့တဲ့ ဒိုင္ယာရီက စုံတြဲဒိုင္ယာရီစာအုပ္ေလးပါ ။ အဲ့အျပင္ ဒိုင္ယာရီထဲက စုံတြဲေလးက သူမတို႔ေက်ာင္းက ဟ်ိဳရွင္းနဲ႔ ရွီအြန္းဆိုတဲ့ lesbian စုံတြဲေလးပါ ။ဒီဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာေတာ့ ...
IMDB: 6.4/10 3,133 votes
Whispering Corridors2: Memento Mori (1999)
Dirty Sexy Saint(2019) Dirty Sexy Saint(2019)ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာပါတယ်ပြောပြော...ဘယ်လိုအရာတွေကိုပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားပါစေ....အချစ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအဖို့ မဟာငရဲတွင်းကိုရောက်သလိုပါပဲ....ဒါကြောင့်ပဲ အများသူငါ ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကောင်မလေးဟာအချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုမတည်ဆောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ကပေးစားတဲ့သူကိုမယူဘဲ အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ပါတယ်....ဒီလို ဆင်းခဲ့လို့ အပြင်လောကဟာ အခက်အခဲတွေ မျိုးစုံပါပဲ....သူမရပ်တည်ဖို့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရုန်းကန်ရမလဲ...သူမ လိုချင်တဲ့အချစ်စစ်ရော တွေ့နိုင်ပါ့မလား....အချစ်ကားကောငး်ကောင်းလေးတွေ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအဖို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ The One ပဲဖြစ်ပါတယ်...File Size : (850 MB) and (389 MB) Quality :WEB-DL 720p Format…mp4 Duration…01:44:00 Genre : Romance , Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by The One Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 6.0/10 389 votes
Dirty Sexy Saint(2019)